တွေ့ ဆုံ အကြွေးပေးခန်း | Layma's World
« အချစ် ဆိုသည်မှာ … အစား.. အသောက်… »
သားကြွက်, on October 26, 2008 at 8:03 pm said:
ဂျာနယ်အလစ်မသုတ်ပါဘူး ရွှေပြည်ကြီးက ဂျာနယ်တွေ ဘယ်မှာပဲ အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ သိတယ်ဟုတ် 😛 ဘလော့ဂ်ဂါ မိတ်ဆွေ တချို့ နဲ့စိတ်ကောက်တတ်တယ်ဆိုတာက ဟိုဦးကြွက်ကြီးက တစ်ခါခါ အနိုင်ကျင့်တာကိုးဗျ ထင်မြင်ချက် ၅ ချက် အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခုမှ သေချာ သိသွားသလိုမို့ဆင်ဆာဖြတ်တယ်တဲ့ အော်…ငါ့နှယ်ဆိုးလိုက်တဲ့ ကြမ္မာ ဥပမာ အနေနဲ့ တောင်မရေးနိုင်ဘူးပေါ့လေး ဟုတ်သား ကောင်ကင်ကြီးက ဦးတွတ်ပီလို သူ့မယ်မျှင်ကို ထိလို့ ဆိုပြီး ၆ လုံးပြူးနဲ့ လိုက်မှ ဟုတ်ပေ့ ဖြစ်နေအုံးမယ် ပြေးပြီးးး တီကြွက်ရေ့
ရေးပေးတာ ခပ်ပွန်းခပ် 😀
မင်းကျန်စစ်, on October 26, 2008 at 8:04 pm said:
သာမန်ဆိုရင်တော့ ကျနော်လည်း ဘန်းကျော်နည်း ပြောပြပေးမလို့ ခုတော့ ပြောပါဘူး နော့လေ။ 😛 ပြောစရာလား။
ညီကြွက်ကို ကောင်မလေးတွေ စိတ်ကူးမလွဲဖို့ ကြေညာပေးထားတယ်ပေါ့လေ။
ဟေ့ကောင် ညီကြွက် ! ကျေးဇူးတင်စကား မပြောသေးဘူးလား။ အမြန်ပြောလိုက်လေ…။
(တရုတ်ကားထဲမှ လေသံနှင့် ပြောသွားသည်) 😀
Anonymous, on October 26, 2008 at 11:03 pm said:
စောစောက ကော်မန့်တင်တာ မပေါ်ပါလား.. အယ်ရာ တက်နေတယ်ထင်တယ်။
မေးထားတာတွေ ဖြေပါ့မယ် =)
ShwunMi_ရွှန်းမီ, on October 26, 2008 at 11:04 pm said:
(ခုတော့လည်း ပေါ်တာ မမြန်လိုက်တာ.. နာမည်တောင် မရေးလိုက်ရသေးဘူး..)
THS, on October 27, 2008 at 3:31 am said:
နားနားနေနေပဲ ရေးကြတာပေါ့အစ်မရယ်နော် …
chaos, on October 27, 2008 at 4:58 pm said:
ကြာကြာမှ တစ်ခါရေးလဲ ဖတ်ရတာ မိုက်နေတယ် ချစ်မရေ။
ညိမ်းညို, on October 27, 2008 at 6:07 pm said:
ငွေကြယ်ပွင့်များကို အားကျသဗျို့ 🙂 🙂
တိန်!!! အမယ် ဂျာနယ်လစ်ဆရာလေးက နာ့ကိုပါ ခပ်သွားပါရောလား ဟဟ 😀
ကိုကောင်းကင်ကြီး ဘန်းကျော်နည်းက အာဘွားအခါ၁၀၀ တဲ့ 😛
JK နော်အစ်မကြီး စိတ်မဆိုးနဲ့ 🙂
sin dan lar, on October 28, 2008 at 9:06 am said:
သူသည် အမြဲလိုပျောက်နေပြီး တက်ဂ်ခံရမှသာ ပြန်ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် သူ့အား များများတက်ဂ်ကြပါကုန်…..
(ဟိ….အချွန်နဲ့ မ သွားခြင်း)
မွန်, on October 30, 2008 at 12:58 pm said:
မမလေးမနဲ့ မောင်မျိုးတွေ့ဆုံခန်းဆိုရင်တော့ လုံးဝလူစည်ပြီ celebrity တွေချည့်ပဲကိုး ဒါပေမယ့် သူနဲ့သာဆိုတဲ့ မေးခွန်းကြီးကတော့ အတော်ကြောင်တယ်နော်မမ ဘယ်သူစပြီးတီထွင်လိုက်လဲမသိဘူး မီလဲ မမလေးမနဲ့သာချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရင် မေးခွန်းကို ဘယ်လိုဖြေမလဲ တွေးတွေးပြီး ရယ်လိုက်ရတာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးတတ်တာတော့ ရိပ်မိပါရဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရေးရဲသေးဘူးလား ဒါမလွတ်မလပ်ရေးတာလား မွန်တော့ ထင်ပါဘူးနော်
ဝေလေး, on October 31, 2008 at 1:12 pm said:
ဟားဟား အစ်ကိုတော်ကို ဂျာနယ်အလစ်သမားတဲ့.. ဟိဟိ
မမလေးမရဲ့ လွပ်လွပ်လပ်လပ်တွေးတတ်တာကိုတော့သိပြီးသားပါ…. လွပ်လွပ်လပ်လပ်မရေးရဲဘူးလား…..
ShwunMi, on November 9, 2008 at 11:07 pm said:
မေးတာတွေ ဖြေပြီးပါပြီ ရှင့် =)